Abakhiqizi bemikhiqizo, Abahlinzeki - Ifektha yemikhiqizo yase China
ICPLA Esezingeni eliphezulu Yokusika ...
ICustla Plast-ye-Sustainab ...
I-CPLA + Como-based Com ...
ICompost-based Compostabl ...
I-100% bamboo yemvelo kabusha ...
I-CPLA Reableable Tableware Eco-friendly
I-bioplastic rewareable tableware yenziwa nge-bioplastic enomzimba. Indwangu ibizwa nge-PLA futhi yenziwe nge-cornstarch. Ayikho Ingxube yePulasitiki futhi Ayikho Inambuzane. Lokhu kusikwa okumibalabala kusetshenziselwe ukwenza kumnandi kakhulu kusihlwa. Engasindi futhi intofontofo ukuyisebenzisa, ilungele ukukhempa ekhaya noma ipikinikini. Ukuhlanza kuphephile, ngicela ungafaki i-microwave.
I-Eco-friendly bamboo Fibre Baby Dinner I-Tableware Set
I-toddler emibalabala futhi ejabule nokudla kwengane idla ubhedu ngokwedlulele futhi ihlala njalo yenziwa kusuka ku-bamboo fiber yemvelo ngaphandle kwezithako ezinobuthi. Ephephe kakhulu kunepulasitiki nezinye izinto eziyingozi. Futhi ukuthungwa kwe-bamboo kwenza kube lula ukuthi izingane zibambe.
ICPLA Compostable Cutlery Box Box nge-Display Tear-away Box
Ibhokisi Elikhethekile Eligoqiwe Umuntu ngamunye oqoqiwe we-CPLA onenqola enebhokisi lokubonisa. Kwenziwe kusuka Kwimithombo Yezitshalo Engavuselelwa Futhi Esetshenziswayo. Zamukelwa izimakethe zase-Europe naseMelika.
ICPLA Plastic-free Sustainable Renewable Cutlery Kit - Isikhwama sephepha
Le sethi yokusika iqukethe ummese we-CPLA, imfoloko, isipuni kanye nesigaxa. Ukuze kube lula kuwe, isethi igcwele esikhwameni sephepha le-kraft. Kufanelekile ukusebenzisa izitsha ezishisayo, ezizenza zilungele izinjongo zokuthatha uhambo. Kuhle ukusetshenziswa komunye umcimbi noma umbuthano ongaphandle!
ICPLA Plastic-free Sustainable Renewable Cutlery Kit - Isikhwama esinamandla
Le sethi yokusika iqukethe ummese we-CPLA, imfoloko, isipuni kanye nesigaxa. Ukuze kube lula kuwe, isethi igcwele esikhwameni se-foil compostable. Kufanelekile ukusebenzisa izitsha ezishisayo, ezizenza zilungele izinjongo zokuthatha uhambo. Kuhle ukusetshenziswa komunye umcimbi noma umbuthano ongaphandle!
ICPLA + bamboo esekwe ngokuPhilayo kaPlantable Plastable-Plane-Rangewable 6 inches
ICPLA-based Compostable Plastic-free Renewable usayizi omncane omncane osikiwe
I-crystallized poly-lactic acid, noma i-CPLA, iyi-polymer eyenziwe kabusha esitshalweni esetshenziselwa ukusikeka kwethu. I-compost ye-ECLA eyakhiwe iqinile futhi iqinile ngokuqina okushisa okuphezulu. Ubuncane obuncane obususelwa emaphashini bungasetshenziselwa ukufaka ikhofi, isiphuzo esincane, ibhulakufesi, u-ayisikhilimu omsebenzi wokudla ongaphandle noma ongaphakathi.
ICPLA Platedable Plostable Plastic-free Renewable 6 inch cutlery eyi-Plant
I-crystallized poly-lactic acid, noma i-CPLA, iyi-polymer eyenziwe kabusha esitshalweni esetshenziselwa ukusikeka kwethu. I-compost ye-ECLA eyakhiwe iqinile futhi iqinile ngokuqina okushisa okuphezulu. Izilimo ezingenaglasi zepulasitiki zingasetshenziswa ukusekela isobho, izitsha zerayisi, noma okunye ukudla okuphuma ngaphandle kokudla kwangaphakathi noma ngaphakathi.
ICPLA-based Compostable Plastic-free Renewable engu-6.5 inch Cutlery
ICPLA Platedable Plasticable-Plost-Plant-Free Renewable 7 inch Cutlery engasakhiwa
I-Birchwood FSC Natural Renewable Cutleable Compleable
Ukuzisika kwethu kwenziwa kusuka ku-100% FSC®izinkuni eziqinisekisiwe. Sisebenzisa izinkuni ze-birch ezivuselelekayo zokusika kwethu ngoba luhlobo lokhuni olukhula ngokushesha. I-FSC®iyindlela esezingeni lomhlaba jikelele yamahlathi esimeme futhi baqinisekisa ukuthi kuyo yonke imithi egawulwayo, kutshalwa isihlahla esisha. I-FSC®ejwayelekile futhi inakekela izitshalo zemvelo kanye nezilwane zehlathi. Ukusika kwethu akuxhunyiwe ukuze uthole ukusikwa kwemvelo okungama-100% okuvumelanayo ngokuphelele.